၁ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် ၉၀ Fuel Station_Naypyitaw.pdf
၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၁၇၈ Fuel Station_Yangon.pdf
၃ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၆၂၂ Fuel Station_Mandalay.pdf
၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၂၁၄ Fuel Station_Ayerwaddy.pdf
၅ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၂၄၉ Fuel Station_Bago.pdf
၆ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၆၄ Fuel Station_Magwe.pdf
၇ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၁၉၈ Fuel Station_Sagaing.pdf
၈ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၂၂ Fuel Station_Tanintaryi.pdf
၉ ကချင်ပြည်နယ် ၈၉ Fuel Station_Kachin.pdf
၁၀ ကယားပြည်နယ် ၁၅ Fuel Station_Kayah.pdf
၁၁ ကရင်ပြည်နယ် ၄၅ Fuel Station_Kayin.pdf
၁၂ ချင်းပြည်နယ် ၄ Fuel Station_Chin.pdf
၁၃ မွန်ပြည်နယ် ၁၁၈ Fuel Station_Mon.pdf
၁၄ ရခိုင်ပြည်နယ် ၃၆ Fuel Station_Rakhine.pdf
၁၅ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ၅၄ Fuel Station_Shan(E).pdf
၁၆ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ၁၈၈ Fuel Station_Shan(N).pdf
၁၇ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ၁၅၉ Fuel Station_Shan(S).pdf
ပြည်နယ် ကုမ္ပဏီ/လေဆိပ်များ တည်နေရာ တယ်လီဖုန်း
နေပြည်တော် Pioneer Aerodrome Services
နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် လယ်ဝေးမြို့နယ် ၀၁-၅၃၃၀၃၁
နေပြည်တော် National Energy Puma Aviation
Services Co., Ltd. (NEPAS)
နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် လယ်ဝေးမြို့နယ် ၀၆၇-၂၂၀၃၆
၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး National Energy Puma Aviation
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၅၀၁၀၁၄၅
၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး National Energy Puma Aviation
မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် တံတားဦးမြို့ ၀၂-၂၇၀၄၆
၅ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး National Energy Puma Aviation
ထားဝယ်လေဆိပ် ထားဝယ်မြို့ ၀၅၉-၂၁၆၅၇
၆ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး National Energy Puma Aviation
မြိတ်လေဆိပ် မြိတ်မြို့ ၀၅၉-၄၁၀၉၆
၇ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး National Energy Puma Aviation
ကော့သောင်းလေဆိပ် ကော့သောင်းမြို့ ၀၅၉-၅၁၉၅၄
၈ ကချင်ပြည်နယ် National Energy Puma Aviation
မြစ်ကြီးနားလေဆိပ် မြစ်ကြီးနားမြို့ ၀၇၄-၂၂၃၅၈
၉ မွန်ပြည်နယ် National Energy Puma Aviation
မော်လမြိုင်လေဆိပ် မော်လမြိုင်မြို့ -
၁၀ ရခိုင်ပြည်နယ် National Energy Puma Aviation
စစ်တွေလေဆိပ် စစ်တွေမြို့ ၀၄၃-၂၃၂၂၇
၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် National Energy Puma Aviation
ကျောက်ဖြူလေဆိပ် ကျောက်ဖြူမြို့ ၀၉-၄၀၃၀၈၉၆၃၄
၁၂ ရှမ်းပြည်နယ် National Energy Puma Aviation
ဟဲဟိုးလေဆိပ် ဟဲဟိုးမြို့ ၀၈၁-၆၃၁၉၆
၁၃ ရှမ်းပြည်နယ် National Energy Puma Aviation
တာချီလိတ်လေဆိပ် တာချီလိတ်မြို့ ၀၈၄-၅၁၀၀၁
တိုင်းဒေသကြီး ကုမ္ပဏီအမည် ‌ရေယာဉ်အမည် တည်နေရာ တယ်လီဖုန်း
၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Mya Gae Trading Co., Ltd. သုမန
13020 အမှတ်(၁)၊ ကုန်ဈေးတန်းလမ်း
(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၀၁-၆၈၄၇၅၅
၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Kyaw San Co., Ltd. သုပ္ပရောဓ
13357 အမှတ်(D-69)၊ ကန်သာယာလမ်း
FMI City၊ လှိုင်သာယာမြို့ ၀၁-၃၇၇၀၇၃
၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Asia Sun Trdg Co., Ltd. အမ်တီ-MEPAS
7160 A အမှတ်(၁၀၃)၊ ရွှေသံလွင်ကွန်ဒို
ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့ ၀၉-၄၂၁၁၃၇၅၅၉
၄ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Khine Khine Phyo Int’l
Trading Co., Ltd. အမ်တီ-ခိုင်ခိုင်ဖြိုး(၃၄)
7105 A အမှတ်(၃၅၀/၃၅၂)၊ အခန်း(၂)
၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Denko Trading
Co., Ltd. MT-Denko Princess/
7194 A အမှတ်(၁)၊ ကနောင်မင်းသားကြီး
၆ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး Khine Khine Phyo Int’l
Trading Co., Ltd. အမ်တီ-ခိုင်ခိုင်ဖြိုး(၂၇)
6765 A အမှတ်(၃၅၀/၃၅၂)၊ အခန်း(၂)
၇ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဦးတင်ဝင်း မိဘမေတ္တာ(၁)
11929 အမှတ်(၉)၊ မရမ်းယိုလမ်း
၈ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဦးဟန်သင်းအောင် ခြူး-၁
13607 ၅/၄၁၂၊ ရုံးရပ်မြောက်ပိုင်း
၉ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး Shwe Myan Aung
Co., Ltd. အမ်တီ-၂၀၇
6255 A ၇၈-အေ၊ အင်းယားလမ်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၅၂၆၄၅၄
၁၀ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး Shwe Myan Aung
Co., Ltd. အမ်တီ-၇၂၀
6597 A ။ ။
၁၁ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး Shwe Myan Aung
Co., Ltd. အမ်တီ-၁၈၉
6222 A ။ ။
၁၂ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး Light Face Tdg.
Co., Ltd. အမ်တီ-Michilion 3
6739 A အမှတ်(၁၇/အေ)၊ တိုက်အမှတ်(ဘီ)
ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၀၉-၅၁၇၇၈၁၁
၁၃ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး Light Face Tdg.
Co., Ltd. အမ်တီ-Michilion 7
6598 A ။ ။
၁၄ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး Light Face Tdg.
Co., Ltd. အမ်တီ-Michilion 99
6899 A ။ ။
၁၅ မွန်ပြည်နယ် Khine Khine Phyo Int’l
Trading Co., Ltd. အမ်တီ-အောင်မြတ်မော်
5661 A အမှတ်(၃၅၀/၃၅၂)၊ အခန်း(၂)
၁၆ မွန်ပြည်နယ် Yar Zar Min Industry
Co., Ltd M.T Yar Zar Min- B1
6884(A) အမှတ်(၈၇၀)၊ ရတနာလမ်း
၁၇ မွန်ပြည်နယ် Khine Khine Phyo Int’l
Trading Co., Ltd. အမ်တီ-ခိုင်ခိုင်ဖြိုး(၃၃)
6915 A အမှတ်(၃၅၀/၃၅၂)၊ အခန်း(၂)
၁၈ ရခိုင်ပြည်နယ် အင်းပေါက်ဝကုမ္ပဏီလီမိတက် MT-Say Ta Nar Moe
6454 A အမှတ်(၂၆)၊ ၄၃ လမ်း
၁၉ ရခိုင်ပြည်နယ် အင်းပေါက်ဝကုမ္ပဏီလီမိတက် MT-Big Sea
6589 A ။ ။
၂၀ ရခိုင်ပြည်နယ် အင်းပေါက်ဝကုမ္ပဏီလီမိတက် MT-Shwe Lin Naing
6095 A ။ ။
၂၁ ရခိုင်ပြည်နယ် Viking Marine Products
Trd. Co., Ltd. MT.Htoo Myitta
Annawar (5741A) ပုဇွန်တောင်အောက်လမ်း
(၃)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၀၉-၄၂၇၂၈၅၇၁၂
ပြည်နယ် အမည်/ကုမ္ပဏီအမည် တည်နေရာ တယ်လီဖုန်း
၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Apex Gas & Oil Public
Co., Ltd. အကွက်အမှတ်(၁)နှင့်(၂)၊ သီလဝါဆိပ်ကမ်းဒေသ ကျောက်တန်းမြို့နယ် ၀၉-၄၉၃၃၃၄၀၀၃
၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Regency Material Trading Co., Ltd. ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀၁-၆၄၅၁၀၈
၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြတ်မေတ္တာမွန်
ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီလဝါဆိပ်ကမ်း၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၀၁-၄၀၀၃၅၇
၄ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြဝတီထရေးဒင်းလီမိတက် ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ် ၀၁-၃၈၇၁၉၆
၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Green Asia Services Co., Ltd. သီလဝါဆိပ်ကမ်း အကွက်အမှတ်(၁၇/၁၈-က)
၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Max (Myanmar) Services Co., Ltd.
အကွက်အမှတ်-၁၅/၁၆ (စီ)၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်၊
၇ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Puma Energy Asia Sun
Co., Ltd. သီလဝါဆိပ်ကမ်းဒေသ၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၄၂၁၁၃၇၅၅၉
၈ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး Regency Material Trading Co., Ltd. အမှတ်(၂)နယ်မြေ၊ လက်ပန်ချောင်ကွင်း၊ မြင်းမူမြို့ ၀၁-၆၄၅၁၀၈
Download Link : Airport.pdf
Download Link : Vessel1.pdf
Download Link : Tank.pdf